Hampisakafoana ankizy 200 000: mila vola 6 tapitrisa dolara ny Pam | NewsMada
Hampisakafoana ankizy 200 000: mila vola 6 tapitrisa dolara ny Pam
Fomba iray ahafahana mitazona ny kilonga any an-dakilasy ny fizarana sakafo isan’andro amin’ny andro fianarana. Sady mitondra fahasalamana ny sakafo nefa manampy ny mpianatra amin’ny fahazoana ny lesona sy ny fahazotoana tsy hanapaka, araka ny fanazavan’ny tale mpanatanteraka ny Pam, i David Beasley.
Eto Madgasikara, manohana sakafo ny mpianatra amin’ny sekoly 1 000 ny Pam ho an’ny any atsimo tratran’ny haintany matetika sy lavareny. Mila vola hatramin’ny 6 tapitrisa dolara ny Pam ahafahana manohy ny fizarana sakafo ho an’ny mpianatra 200 000 ho an’ny taom-pianarana 2018-2019.
Nanomboka ny alahady lasa teo ary nifarana omaly tany Tunis ny fivoriana maneran-tany momba ny fanjarian-tsakafo ho an’ny ankizy. Miompana amin’ny fampisakafoana ny ankizy any an-dakilasy ny adihevitra sy ny fifampizarana ary mandray anjara amin’izany ny Fandaharasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) eto Madagasikara. Ao anatin’ny mpisehatra koa ny minisiteran’ny Fanabeazana miara-miasa amin’ny fizarana sakafo any an-tsekoly. Havoitra ao anatin’ny fihaonana ny olana mifandraika amin’ny fanjarian-tsakafo ka handrisihana ny fiaraha-miasa amin’ny firenena maro. “Ampirisihina koa ny firenena mpandray anjara rehetra hanatsara ny fandaharanasa momba ny fanjarian-tsakafo any an-dakilasy sy hamaly ny tanjona maharitra ho an’ny fampandrosoana (ODD)”, hoy ny tale mpanatanteraka ny Global Child Nutrition Foundation, i Arlène Mitchell.